Fumana uVavanyo lwaSimahla lweBlog yakho okanye yeSiza | Martech Zone
Ubeke umzamo omkhulu kwindawo yakho yeshishini okanye blog ebumbeneyoLixesha lokuba uyilungise. Sibhale ukubhloga ngokuBumbeneyo kwiiDummies ukunceda amashishini aphucule iibhlog zokwakha igunya kunye nokufumana izikhokelo kwi-Intanethi. Nangona le ncwadi igxile ekubhlogweni nasekubhaleni amaqonga, ithiyori yandisa iwebhusayithi ebumbeneyo ukuya kuthi ga kwiphepha lokuhlawulwa lokucofa.
Uninzi lwenu sele luqalile ukuyifunda le ncwadi kwaye ingxelo iyonwabisa. Besisazi ukuba sinomthengisi ohamba phambili- kodwa khange siqonde ukuba le ncwadi iza kwamkeleka kangakanani. Abanye abantu bazibhalele ngokwabo kwaye basazise ukuba ukugcwala kunye nokuguqulwa kwabo sele bekwibhlog yabo ngaphakathi kweeveki zokuhambisa ezinye zeendlela. Kuhle!
Into esingakhange siyibone ukuza kuthi ga ngoku, nangona kunjalo, kukujonga kwakhona AmazonImida, Barnes noNoble, Iincwadi zokufunda, Ishelfari, yaye iglu.
Ukuba uyayiphonononga incwadi kwi-intanethi, siza kwenza uphononongo lwendawo yakho okanye ibhlog yakho kwaye sikunike ingxelo eyakhayo ngokubhekisele kuyilo, ukukhangela kwiinjini yokukhangela, ukuguqula ukusebenza kunye nefuthe lilonke. Siza kuthi yibhale eposini kwaye ucacisele abafundi ukuba yintoni le uyenzayo. Sasidla ngokwenza oku kule bhlog kwaye sayibiza ngokuba "yiBhlog Tip" kwaye bazenzela izithuba ezintle!
Umgaqo kuphela kukuba wena Kuya kufuneka ukuba ufunde ukubhloga kweNkampani yeDummies Kwaye kufuneka uthumele ikhonkco lokujonga kwakhona kwizimvo zale posi. Nje ukuba wenze, siza kuqala. Ukuba ubeka umsebenzi kuhlolo lwakho, siza kuwubeka owakho umsebenzi!
tags: ukhomyutha yamafuimbaliUhlalutyo lwebhokisi engenayoumbono weselfowunibuyisela enye indlelaIzizwe
Sep 11, 2010 ngo-1: 34 PM
Hee bafo, ndiyavuya ukunibona kwiBhlog yaseIndiana kwaye ndiyabulela ngokundiphathela iVitamin Water. Ndingena nje kule ncwadi, kwaye yiyo yonke into ebithembise ukuba iza kuba yiyo.